Dhagar qabe u kala gudbin jiray hubka fudud Alshabaab oo la xukumay. | Somali National Television - sntv.so
Home AMNIGA Dhagar qabe u kala gudbin jiray hubka fudud Alshabaab oo la xukumay.
Dhagar qabe u kala gudbin jiray hubka fudud Alshabaab oo la xukumay.
Muqdisho (SNTV)- Maxamed Cabdullaahi Maxamed Muuse oo magaciisa Afgarashada loo yaqaano (Xuseen Dheer) ayaa loo xiray Fabruary sanadkan kamid ahaanshiyaha Maleeshiyada Alshabaab gaar ahaan qayb u abaabulan u kala gudbinta hubka fudud oo ay dilalka Dhagarta ah ku geystaan maleeshiyada.
Previous articleWakiillada Midowga Afrika iyo IGAD oo ka degay Dhuusamareeb lana kulmay Ra’iisul Wasaare Khayre+sawirro
Next articleTaliyaha hoggaanka laanta canshuuraha oo faahfaahin ka bixiyay Saraakiil loo xiray wax is-dabamarin